Etu esi ewu usoro ahia ahia dijitalụ | Martech Zone
Ole na ole kweere na irè marketing atụmatụ nwere ike belata ụgwọ mkpọsa ahịa site na Ruo 70%. Ọ bụchaghị na ọ ga-achọtarịrị ọkachamara. N'isiokwu a ị ga-amụta otu esi eme nyocha ahịa na aka gị, na-enyocha ndị asọmpi gị wee chọpụta ihe ndị na-ege ntị chọrọ n'ezie.
Atụmatụ aghụghọ nwere ike belata ụgwọ ahịa site na $ 5 nde ruo 1-2 nde. Nke a abụghị mma, nke a bụ omume anyị ogologo oge. Ndị a bụ usoro ịchọrọ iji wuo atụmatụ ahịa siri ike: iwulite usoro iwu (nyocha nyocha gbasara ịmụ, ndị ọkachamara na-ezukọ), imepụta ngwa ahịa (nyocha ahịa na ndị na-ege ntị) na ịhọrọ ọwa nkwalite nke ọma.
Readkwadebe: Na-eche Mpịakọta Ahịa na Mmasị ya
Nchọpụta ahịa dị mkpa iji nyochaa asọmpi, uru na ikike nke ahịa. Enwere ike ime ya site na isi mmalite mepere emepe na-egosipụta mbipụta mgbasa ozi yana akwụkwọ ndekọ ego ụlọ ọrụ na akwụkwọ akụkọ pịa bipụtara na .ntanetị. Ọ na-ewekarị ihe karịrị izu abụọ iji chọọ site na usoro usoro iwu. Ya mere, ewepu oge iji mezuo ya.
Iji maa atụ, ọ bụrụ n’ikpebie ịmalite azụmaahịa ifuru, dịka imepe ụlọ ahịa na ịnye ọrụ nnyefe, ị ga-eleba anya Ahia Ifuru na New York City akụkọ na-egosi nchịkọta akụkọ ahịa na akụkọ ihe mere eme maka afọ ole na ole sochirinụ. E wezụga nke ahụ, ị ​​kwesịrị ị na-aga n’ Internetntanet ka ị mụta ikike nke niche metụtara obodo gị ma ọ bụ mpaghara gị. Lezienụ anya pụrụ iche na azụmaahịa ọhụrụ na ngbanwe ahịa (dịka, iweghara obere ụlọ ọrụ site na nnukwu otu; ịgafe azụmaahịa n'akụkụ karịa otu ụlọ ọrụ n'abali; ọhụrụ ndị asọmpi, wdg) yana ederede ederede na isiokwu metụtara isiokwu na mgbasa ozi azụmaahịa dịka, Ifuru nke Mba: Etu Azụmaahịa Ifuru si agba ọsọ na New York City.
Mmekọrịta ihu na ihu na ndị ọkachamara, ndị ọkachamara na ndị mmepe na-enyekwa ezigbo uru maka ịnweta ozi azụmaahịa.
Ole ndị bụ ndị asọmpi gị?
Za ajụjụ a chọrọ nnukwu ihe gafere. Na ijide-dị ka-nwude-ike obibia bụ ihe kasị mma.
Ka e were ya na ị chọrọ imeghe e-ụlọ ahịa àjà na-anapụta àjà ihe ọ -ụ pilụ nkasi obi ohiri isi na matarasị (dị ka oge na-akwụsị na-ata ahụhụ site na ehighị ụra nke ọma mechara). N’ezie, ị nyochala isiokwu ahụ, nyochachaa ụdị mpempe akwụkwọ ọ bụla ma chọpụta na ụdị ngwakọ nwere ụdị orthopedic kachasị mma na-ejikọ iyi na ụfụfụ. Na nkenke, ngwaahịa dị.
Ugbu a ọ bụ oge iji nyochaa nke ọma ihe ndị asọmpi gị na-enye yana otu ị ga-esi pụta ìhè. Ọ bụrụ na ị ga-enyocha ndị asọmpi gị, ị ga-akọwa njirisi nyocha siri ike nke ga-ahazi ọchụchọ ahụ, kwado nyocha ahụ ma nyere gị aka ịhazie nkwubi okwu dabere na nsonaazụ enwetara. Dịka ọmụmaatụ, maka ụlọ ahịa ohiri isi gị na nke matarasị ị kpebiri idekọ eziokwu ndị a dị mkpa:
Ndepụta ndị asọmpi. Ahịa abụghị otu. N'ihi ya, ọ chọrọ nlebara anya pụrụ iche.
Jide n'aka na ị maara nke ọma gbasara ndị isi nke ụlọ ọrụ na-ehi ụra na-ehi ụra yana netwọk ụlọ ahịa orthopedic na ndị egwuregwu mpaghara. Echefula banyere ndị na-asọmpi gị na-enweghị isi, dịka ụlọ ahịa, ụlọ ahịa na ebe a na-ere ihe ihi ụra. Eleghị anya ị gaghị eleba anya na ha niile, họrọ nke kachasị mkpa ma tinye ha na ndepụta gị dị mkpirikpi.
Ndepụta ngwaahịa (ohiri isi, matarasị, ngwa, ngwa ahịa pụrụ iche) yana ogo ha.
Dị ego na, ya mere, niche ndị ndị asọmpi ahụ bi.
Ọnọdụ na USP (kedu uru ndị ndị asọmpi gị kwuru).
Ahịa ọdịnaya (posts na blọọgụ dị iche iche, nzipu ozi, mbipụta mgbasa ozi mmekọrịta, na mgbasa ozi vidiyo).
Nwere ike ịmepụta okpokoro Excel iji chekwaa ma tunyere ozi ị chịkọtara. Dabere n'ụdị ahịa na ebumnuche gị, njirisi ndị a ga - adịgasị iche mana ha ga - emetụta njikọta nke akụkụ atọ - ngwaahịa (USP, ọnụahịa, ọnụ ahịa ahịa), ahịa (ọnọdụ, nkwukọrịta, ọdịnaya blog, SMM, PR, akpalite atụmatụ) ma lekwasịrị ndị na-ege ntị anya. Ọ dị mkpa iburu n’uche na a na-ejikọ ụzọ abụọ nke mbụ na ndị na-ege ntị. Yabụ, kpachara anya mgbe onye ịsọmpi gị na-ere ahịa ya. Banyere ezigbo ụra ahịa, ị ga-achọpụta ozugbo etu okwu maka iresị ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị gbara afọ 20 na 35 dị iche iche, dị iche na nke inye ndị nwanyị ohiri isi.
Nke abuo, nyocha ọ bụla kwesịrị iweta nsonaazụ. Ma ọ bụghị ya, ọ bụrụ na ị na-egwu mmiri n'oké osimiri nke ihe ọmụma, ị nwere ike ịmalite mmiri n'ihi oke mmiri ozuzo na-atụghị anya ya. Ya mere, anyị na-akwado gị iji ụzọ dị mfe nke iji anya nke uche hụ ozi echekwara na faịlụ Excel gị.
Nhọrọ 1: Creatmepụta ibe akwụkwọ 1 maka onye ọ bụla na-asọmpi ma ọ bụ 1-pager.
Ọ bụghị n'efu ka anyị kpọtụrụ njirisi nyocha, dịka ọ bụ ugbu a na anyị ga-achọsi ha ike. Mepụta ihe ngosi 1-slide na onye ọ bụla na-asọmpi, na-achikota ihe ọmụma banyere onye ọkpụkpọ ahụ nakwa banyere njirisi kachasị mkpa n'echiche gị.
1-pager anaghị achọ ịrapagidesi ike na peeji 1. Ebumnuche bụ iji nweta nnabata doro anya ma dị mfe nke ozi dị.
Nhọrọ 2: Mepụta ndị egwu bọọlụ
E nwere ọtụtụ ụzọ ị ga-esi were. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike iji SWOT Competitor Analysis Excel Template ebe ị ga-akọwapụta isi uru nke ndị asọmpi gị, ike ha na adịghị ike ha, ohere uto nwere na ihe egwu. Jiri eserese eserese ma ọ bụ matriks na oghere X na Y bụ ihe kachasị mfe na nke kachasị mma iji ghọta nke a. Debe otu n'ime ahịrị ndị na-ege ntị (dị ka, ahịa ahịa na nke kachasị elu, ndị mbido na ndị ọkachamara), ma kọwaa n'akụkụ nke ọzọ ụzọ nkwukọrịta siri ike (ezi uche na nke mmụọ) ma ọ bụ ngwaahịa dị iche iche (dịka, ogo nke ngwaahịa a mgbagwoju anya / mfe, ihe ize ndụ, ohere-elekwasị anya ma ọ bụ lekwasịrị anya dị mma, wdg).
Nchịkọta nwere ike ịdị iche. Mana ha kwesiri ka ike gwụchaa ma ha anaghị ekpuchi, yabụ nkwubi okwu gị ga-abụ eziokwu. E wezụga nke ahụ, anyị na-adụ ọdụ ịgbaso usoro nke ndị na-ege ntị na nkewa ngwaahịa.
Kedu ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ịnweghị ozi?
Edobela onwe gị naanị nyocha nke weebụsaịtị, ịre ahịa ahịa, ntụgharị na ụgwọ ego. Gaa n'ihu ma mụọ, dịka ọmụmaatụ mmemme iguzosi ike n'ihe. Olee otu i si eme nke a? Banyere ndị ọchụnta ego ụra, ị nwere ike chọọ klọb ndị hụrụ ụra n'anya, sonyere ha ma nweta etu ha si akwalite echiche nke ezigbo ụra n'etiti ndị na-ege ha ntị ma na-enye ha ihe ịzụ ahịa. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, ka anyị kwuo, n'inyefe sushi, ị nwere ike ịzụta n'aka ndị na-egwu ahịa ndị ọzọ wee mụta ihe onyinye ha bụ, dị ka Download ngwa ma nweta ego or Zụta nnukwu sushi buru ibu ma nweta ihe ọ drinkụ drinkụ n'efu, ma e wezụga mgbasa ozi mgbasa ozi.
Ndeewonu! Ugbu a ị marala otu esi eji ya nzuzo ozuzu ịbịakwute iji chọpụta, ọ dịkarịa ala, ihe abụọ:
Ahụmịhe ndị ọrụ asọmpi gị (gụnyere mmemme iji nweta iguzosi ike n'ihe nye ndị ahịa) yana
Pricekpụrụ ọnụahịa ha na onyinye dị ugbu a.
Nke a bụ otu ihe atụ (site na ahụmịhe nke anyị) nke onye na-azụ ihe nzuzo na-arụ ọrụ:
Mgbanwe mgbanwe nke Europe maka ndị na-ede blọgụ na ndị mgbasa ozi goro anyị ka anyị mee nyocha nke ọma banyere ụdị azụmaahịa nke ndị asọmpi ya na USA, Great Britain na Australia. Nyocha zuru oke nke weebụsaịtị, ngwa, mbipụta mgbasa ozi, nzaghachi na nkwupụta ekwenyeghị nsonaazụ achọrọ na usoro nke ngwaahịa b2b maka ụdị. N'ihi ya, anyị mere atụmatụ nke onye ahịa nzuzo (ihe ngwaahịa na ndị na-ege anyị ntị bụ, ihe anyị na-atụ anya na mmekọrịta anyị na ndị na-ede blọgụ, ihe oge na mmefu ego bụ) wee bido iso ndị njikwa akaụntụ nke nyiwe ndị mba ọzọ metụtara metụtara mmekọrịta. Ndị kọntaktị mbụ ahụ jisiri ike rụpụta ezigbo nsonaazụ. Dịka ọmụmaatụ, anyị mụtara ụfọdụ nkọwa amaburu na mbụ banyere ọnọdụ nkwado nke ndị na-ede blọgụ na usoro ọrụ n'onwe ya yana gbasara amụma ọnụahịa yana ụgwọ ndị ọzọ maka mmefu azụmahịa mba ụwa. Emere anyị ozi ngosi nke email nke ngwaahịa ha na ngosi ngosi nke nyiwe. Ọ bara uru? Eeh. Ọ gbagwojuru anya? Abụchaghị. O doro anya na ọ ga-achọ mgbalị ọ bụla mana enweghị nkà pụrụ iche ma ọlị.
Chọpụta Channels Nkwalite Channels
Kọwa ọwa nkwalite kachasị mma dị mfe site na nyiwe dị ka SimilarWeb, Alexa Internet na ndị ọzọ ọrụ yiri nke ahụ na-enye ozi na weebụsaịtị ọnụọgụ okporo ụzọ.
Kedu ihe na-akpali gị? Gaa Leta SimilarWeb.com wee lelee Traffic Share, wee chọta endyou / peeji ịga nke ọma yana wdg. N'otu aka ahụ, anyị nwere ike ịchọta, dịka ọmụmaatụ, / ụgbọ ala /, wdg.Enwere ohere maka njehie mgbe niile, n'ezie, mana benchmarks nwere ike pụọ otu.
Mara Onye ahia gi
Ugbu a ị matara ndị ndị asọmpi gị, ọ bụ oge iji wulite mmekọrịta gị na ndị na-ege gị ntị.
E wezụga ịmụ banyere ndị asọmpi ahụ, nyocha mmalite oghere na-enyere aka ịmara ọnọdụ na mkpa ndị na-ege ntị ugbu a. Lezienụ anya maka ihe onye ọrụ kwuru na mgbasa ozi mmekọrịta, weebụsaịtị na Youtube. Nwere ike iji Google Adwords chọọ ndị na-ede blọgụ dị mkpa maka ndị na-ege gị ntị. Echefula banyere ilele oge niile banyere isiokwu a.
Ka anyị were ya na ọmarịcha eze na ọmarịcha ọrụ ka na-arụrịta ụka na ịntanetị. Ntụle ahụ a kpọtụrụ aha n'elu ga-emekwa ka ị mata ụwa na ụjọ na-enweghị atụ. N’ụzọ, ị chọrọ ịmepe ụlọọgwụ eze. Chere ihe niile gbasara onye na-asọmpi gị. Dabere na mkpesa ndị ahịa na okwu na-adịghị mma ị ga-amata ebumnuche na-emetụta nhọrọ nke ndị nwere ike ige gị ntị.
Ọzọkwa, ichikota ndị ahịa niile na-atụ egwu imebi ọchịchọ ha ịzụrụ ị nwere ike mepee ọnọdụ siri ike, mepụta slogans ma dee ederede ụmụ amaala maka mgbasa ozi.
Nkesa na Dekọwapụta Ebumnuche
Kedu ndị na-ege gị ntị? Azịza na-ejighị nlezianya nye ajụjụ ahụ bụ ụzọ dị mkpa iji zute nsogbu ahịa na ahịa. Nkesa nke ahia kwesiri ibu oke dika o kwere mee. Pụrụ iche nyocha (rụrụ site metụtara nkà na ụzụ, dị ka Chee echiche na Google n'elu ikpo okwu, ma ọ bụ ịkpọ ụlọ ọrụ, dị ka McKinsey, Accenture, Pwc, ma ọ bụ nnyocha entities, dị ka Nielsen, Gfk), azụmahịa media akwụkwọ yana forums, blọọgụ. na nyocha nke ndi mmadu gha eme ka ichoputa ihe ndi mmadu choro na omume ha.
Ya mere, ịghọta onye ahịa gị ga - enyere gị aka ịhọrọ ọwa nkwalite ziri ezi yana ụdị mgbasa ozi ziri ezi. Y’oburu ibido ngwa ahia e-echekwa maka umu amuru ohuru, gaa ozugbo na Instagram. Ndị nne na-eji denye aha ha na ndị na-ede blọgụ na-ewu ewu ma na-ege ntị n'echiche ha. E wezụga nke ahụ, ọ bụ ọwa na-arụpụta iji kwalite ngwaahịa na ngwaahịa, ịma mma, nhicha na ọrụ ịnye nri, wdg .Ma ọ bụrụ na ị nwere ụlọ ahịa anụ ụlọ mepere emepe, elegharala mgbasa ozi n'èzí anya n'akụkụ ogige ntụrụndụ, ebe egwuregwu nkịta na ebe obibi anụ ọhịa.
Echefula banyere iwu ọnụahịa. Ọ bụrụ n ’idowe onwe gị nanị dị ka onye na-enye klaasị akụnụba ma ọ bụ ọrụ VIP ị na-amachi onwe gị n’ihe gbasara ndị na-ege ntị.
Ngwaahịa ma ọ bụ Ọnọdụ ọrụ
Iso usoro nkwukọrịta azụmahịa siri ike na-abịa bụ ebumnuche kasịnụ nke ndị asọmpi na nyocha ọ bụla. Yabụ, na njedebe dị mkpa ka ị hụ na nguzo gị, jidere anya ndị ahịa gị ma kwuo asụsụ ha.
N'iburu ihe omuma ohuru n'uche, egbula oge iji map nkwukọrịta gosiputa ihe ndia:
Ebumnuche / ebumnuche gị na ọrụ gị (azụmahịa KPI).
Isi uru gị na nchịkọta nkenke banyere uru ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị na-enye ndị ahịa n'adịghị ka ndị asọmpi ahụ.
Kwuo kpọmkwem mkpa na isi ihe mgbu nke ndị na-ege gị ntị ị na-eme (ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ngalaba, mee ya maka nke ọ bụla n'ime ha).
N'ikpeazụ, gosipụta ọnọdụ ọnọdụ gị site na ụkpụrụ, njirimara ngwaahịa na ihe ọ pụtara na ngalaba gị ọ bụla. Echefula ikwupụta ihe mere ndị ahịa ji atụkwasị obi na ngwaahịa gị (dịka ọmụmaatụ, ị nwere ezigbo nzaghachi sitere n'aka ndị ahịa mbụ gị ma ọ bụ gị na ndị mmekọ ama ama).
Ngwaọrụ maka Nkwalite Dị Irè
N'ihe banyere ịhọrọ ngwá ọrụ ịzụ ahịa, ị ga-emeso plethora nke nhọrọ ma na ntanetị ma akara. Ka anyị cheta ndị kasị nkịtị na ndị dị irè nke ha.
Nyochaa Nzaghachi - Nke mbụ, ịkwesịrị ịzaghachi nzaghachi nke onye ahịa ozugbo enwere ike. Ọ ga-ewe gị ihe na-erughị otu ụbọchị ịza na weebụsaịtị na ihe dịka 10-15 nkeji na mgbasa ozi mmekọrịta. Kwalite ọnụ ọgụgụ nke nzaghachi yana ogo ha dịkwa ezigbo mkpa. Mgbe ị na-achọ nchọgharị na Internetntanetị maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ, onye ọrụ na-enweta njikọ ozugbo na weebụsaịtị yana nzaghachi na nlebara anya nke ndị ahịa dị iche iche. Mgbe ahụ, site na engines ọchụchọ ọ nwere ike ịbanye ajụjụ iji chọta nzaghachi dị mkpa. Ọ bụghị ihe nzuzo na ugbu a enwere ike nyochaa nzaghachi na ọbụna zụta. Ihe ntanetị Specialntanetị pụrụ iche ga-ahụ aha ọ bụla banyere ụlọ ọrụ gị na weebụ, nyochaa nzaghachi na-ezighi ezi ma mepụta ọnụọgụ achọrọ. N'ịtụle ọkachamara m, m ga-achọpụta na nzaghachi na-ezighi ezi ma na-anọpụ iche kwesịrị ịbụ pasent 15 na 10 nke oke, n'otu n'otu.
Accountskwalite akaụntụ ụlọ ọrụ na mgbasa ozi mmekọrịta - Tupu ịzụta a ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọtụtụ n'ime ndị na-eduga na-aga ụlọ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ na-elekọta mmadụ media na akaụntụ. Ọdịmma dị elu na mmeghachi ọsọ ọsọ ọ bụla na ajụjụ na nzaghachi ọ bụla gụnyere ihe na-adịghị mma na-ebuli ohere gị nke ịtụgharị na-eduga ndị ahịa ọhụrụ. Utu aha, ịkwesighi ilekwasị anya na ngwaahịa a. Akụkọ banyere ndị ọrụ na azụ na-ewu ewu.
Nduzi Nduzi - Ndị na - ede blọgụ anaghị ajụ ego maka mgbasa ozi zoro ezo. Nwere ike ịnye ha ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị iji gbanwere nkwado enyi. Site na omume, ntụgharị site na mgbasa ozi ezubere iche nwere ike ịnweta mmụba okpukpu ise.
Mgbasa Ozi Mgbasa Ọha - Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị enwetabeghị PR dị ka ngwa ọrụ nkwalite ụlọ ọrụ, PR nwere mmetụta na-emetụta SEO dịka weebụsaịtị na-eme ka ọnọdụ nchọta ọchụchọ ha ka mma site na isi mmalite. Na-amalite inweta aha onye ọkachamara; nata akwụkwọ ịkpọ oku na nzukọ dị iche iche na mmemme profaịlụ ebe ị nwekwara ike kpọsaa ngwaahịa gị. E wezụga nke a, ị gaghị eleghara eziokwu ahụ anya na mbipụta yana echiche ọkachamara gị na echiche gị na-adọta ndị na-ege ntị ọzọ yana ị na-eme ka mmekọrịta dị mma.
Na-achịkọta ihe niile elu: Ndepụta nyocha gị maka iwalite usoro azụmaahịa
Market Research - Bido nyochaa ahịa: lee anya na isi mmalite (mgbasa ozi metụtara isiokwu, akụkọ, azụmaahịa pịa) na iso ndị ọkachamara metụtara metụtara.
Nnyocha asọmpi - Mụọ ndị asọmpi gị: kọwaa njirisi maka nyocha na ịtụtụkọta ozi niile n'ụzọ ọ bụla enwere ike yana site na isi mmalite niile dị. Mgbe ahụ, iji usoro dị mfe kọwaa isi nkwubi okwu gị.
Nnyocha ndị na-ege ntị - Mara ndị na-ege gị ntị. Isi mmalite na nlekota mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na-enyere aka ịme ndị na-atụ gị ụjọ, isi ihe mgbu na ịchọ. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee, gbaa ndị na-elekwasị anya anya nke ọma, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, mebie ezigbo ndị enyi gị.
Nkewa - Niching ala nke ndi na ege nti bu ihe di nkpa dika imata ihe. Kwadebere teknụzụ metụtara ụlọ ọrụ na ndị na-eme nnyocha na profaịlụ nyocha nwere ike inyere gị aka ịmara omume nke ndị ahịa gị. Chee echiche dị ka onye ahịa ma chọọ ozi gbasara ihe ndị na-amasị ya (ihe ọ na-ele, ihe blọọgụ ọ na-agụ, ihe omume ọ na-aga na ntanetị, wdg).
n'ọnọdu - Usoro ịhazi ọnọdụ gị kwesịrị ịgụnye ozi niile anakọtara. Jiri map nkwukọrịta na-enye gị ohere itinye isi n'ụzọ ziri ezi ma na-echekwa nkwubi okwu niile bara uru ị nyochara.
Promotion - Mgbe ị dị njikere ịga n'ihu jiri ngwa ọrụ nkwalite anọ a ma dị ire: nzaghachi, mmemme mmekọrịta ọha na eze, micro influencers na mbipụta PR. Debe ha dika ihe kacha ha mkpa n'oge oge a, duputa atumatu ihe ma gbaa oku.
Tags: Ndị na-emerụ ahụigosi ihe ngosikpioziprnlekota oru mgbasa ozi
Roman bụ ọkachamara ahịa na Fintech, Startup, na ụlọ ọrụ IT. Firmlọ ya ebe ọ bụ onye isi na onye guzobere ya, Ntọala, nwere ndị ahịa n’ụwa nile, gụnyere San Francisco, London, Nigeria, Western and Eastern Europe.